Peeji nke ụlọ & quot; etiti ozi" ozi teknụzụ ndị nyocha China ewepụtala akwa metamaterial efu efu nke enwere ike eyi iji mee ka ahụ jụrụ oyi. - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd., Ltd.
Mgbanwe ihu igwe aghọọla nnukwu ihe ịma aka mmadụ niile na -eche ihu. Na mmepụta na ịrụ ọrụ, a na -ekpughere ndị mmadụ na ọnọdụ ikuku dị elu na insolation, n'ihi ya, ọ dị ngwa ka ndị mmadụ ghọta nchedo mpụga site na iji ike efu. Otu esi ezere mmerụ ahụ nke nrụgide okpomọkụ na -ebute n'ahụ mmadụ yana arụmọrụ dị elu yana obere ume? N'ime akwụkwọ e bipụtara n'oge na -adịbeghị anya n'akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ kacha elu mba ụwa "Sayensị", Ndị otu tao Guangming nke Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke Huazhong, Otu prọfesọ Ma Yaoguang nke Mahadum Zhejiang, Tao Guangming Smart Fabric Studio nke China Textile Research Institute na nyocha sayensị ndị ọzọ na ngalaba ụlọ ọrụ rụrụ ihe ọhụrụ jikọrọ aka wee tufuo echiche friji ọdịnala.. Ejiri akwa friji metamaterial na -enweghị ike nke nwere mmetụta jụrụ oyi dị ukwuu n'okpuru ìhè anyanwụ kpọmkwem. A na -akọ na akwa ahụ nwere ike ime ka ahụ mmadụ dị jụụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5 ℃ na gburugburu ikpughe n'èzí, nwere ezigbo ike jụrụ oyi radieshon, nke dị nnukwu mkpa maka mmezu nke njikwa ọkụ onwe onye dị n'èzí.
Akwa akwa jụrụ oyi nke ndị nyocha mepụtara
A na -esi n'ahụ anụ ahụ subcutaneous agafee akpụkpọ ahụ, wee gbasaa na gburugburu gburugburu site na uwe, si otú a na -ejigide nguzozi ọkụ na -agbanwe agbanwe yana ahụ anụ ahụ kwụsiri ike. Therefore, Njikwa ikpo ọkụ nkeonwe site na uwe bụ ụzọ dị mma iji lekọta mkpa nkasi obi ọkụ nke ahụ mmadụ. Otú ọ dị, Uwe jụrụ oyi dị ugbu a nwere nsogbu nke mmetụta jụrụ oyi nke ọma, arọ adịghị ọkụ, nnukwu oriri ike. Ya mere, n'afọ ndị na -adịbeghị anya, akwa ndị dabere na ụkpụrụ ọkụ na -enwu enwu adọtala nlebara anya nke ukwuu site na agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ. N'ihi na infrared radieshon nso nke ahụ mmadụ (7-14 μm) na -ekpuchi ya na mpio ikuku nke ikuku (8-13 μm), radieshon mhụ nke ahụ mmadụ nwere ike ịjụ oyi ozugbo na mbara ikuku site na mpio ikuku nke ikuku, si otu a nweta umYa mere efu. Therefore, radieshon radieshon site na iji akwa wearable mmadụ nwere ike melite arụmọrụ nkasi obi nke ahụ mmadụ na -enweghị ntinye ike mpụga, nke nwere ike bụrụ ihe mgbakwunye na mgbakwunye na teknụzụ njikwa ọkụ na -agbasasị ike.
Aghọtara na akwa friji nwere ọgụgụ isi nke ndị nyocha mepụtara nwere usoro ihe ọmụmụ nke hierarchical morphological. Dị ka akwa ohere ohere, eriri Ọdịdị, eriri n'ime Nano Ọdịdị, nhazi ọkwa dị iche iche na oghere, akpụ macroscopic nyere iwu, microscopic random morphological usoro nhazi usoro.
Eserese eserese nke akwa friji metamaterial maka jụrụ radieshon ụbọchị
Ndị nyocha ahụ jikọtara teknụzụ metamaterial photoelectric na teknụzụ nkwadebe eriri ogbe, wee họrọ poly na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (lactic acid) (PLA) dị ka eriri akụrụngwa. Mgbe nhazi ọzọ, enwetara edo edo na eriri na -aga n'ihu. Ike eriri zuru oke maka igwe ịkwa akwa iji kpachie ederede na ụdị ọ bụla na akwa azụmahịa. Dabere na nke a, ndị nyocha ahụ gara n'ihu na -eji ịkpa akwa na ịkwa akwa iji nweta akwa metamaterial na -egosipụta 92.4% n'ìhè anyanwụ na 94.5% na etiti infrared.
Nnwale arụmọrụ jụrụ oyi nke akwa metamaterial:
(a) Ihe eserese nke ngwa ule na foto nke nlele; (b) Metamaterial akwa 24 usoro ule jụrụ oyi na -aga n'ihu n'ihu
Na mgbakwunye, ndị nyocha ahụ nwalere ahụ mmadụ simulated wee chọpụta na ọnọdụ okpomọkụ nke akpụkpọ anụ simulated nke akwa metamaterial kpuchiri bụ 5 ruo 7 ℃ dị ala karịa nke owu, spandex na akwa hemp n'etiti ehihie.
Nnwale nnwale nke ịrụ ọrụ jụrụ oyi n'etiti akwa metamaterial na akwa azụmahịa:
(a) Ihe eserese nke ngwaọrụ nnwale na foto nlele (b) Usoro ntụnyere ntụnyere arụmọrụ friji metamaterial
Na ule jụrụ oyi nke ụdị ụgbọ ala, ọdịiche dị n'agbata ụgbọ ala nke ejiri akwa friji metamaterial na ụdị ụgbọ ala kpuchie ya nwere ike iru 27 ℃, na ọdịiche okpomọkụ dị n'etiti ụdị ụgbọ ala na -enweghị mkpuchi nwere ike iru 30 ℃.
Nnwale ntụnyere nke arụmọrụ jụrụ oyi n'etiti akwa metamaterial na mkpuchi ụgbọ ala azụmahịa:
(a) Ụgbọ ala nkịtị na foto infrared; (b) Ntụle ule ntụnyere arụmọrụ friji
Akwa metamaterial dị ọnụ ala karịa uwe nkịtị, nke pụtara na ha nwere ike ime ka teknụzụ nweta ohere karịa mmadụ karịa akwa mmiri na ikuku jụrụ oyi, ka ndị nnyocha ahụ kwuru. Ejikwala akwa metamaterial ahụ nke ọma na mkpuchi mkpuchi ahụike yana akwa mkpuchi, nke nwere ike ime ka okpomọkụ dị n'èzí dị mma ma e jiri ya tụnyere ihe nchekwa ahụike ọdịnala. A na -akọ na imepụta akwa metamaterial nwere obere ihe achọrọ maka akụrụngwa, efu ike oriri, ọnụ ala, imepụta oke mmepụta ihe na njirimara ndị ọzọ, adabara nnukwu nkwalite nkwadebe na ngwa ngwa. (Edemede a sitere na nnakọta data emepere emepe)
(Isi mmalite: Akaụntụ Akaụntụ nke Herald Textile)